Fahatsiarovana an'i Rumi: Lisitry ny lova tsy azo tsapain-tanana an'ny zanak'olombelona ny UNESCO
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Fahatsiarovana an'i Rumi: Lisitry ny lova tsy azo tsapain-tanana an'ny zanak'olombelona ny UNESCO
Kolontsaina • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny faha-747 taonan'ny nahafatesany, ny mistika sy poeta Sufi manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao, Jalāl al-Dīn Rūmī, dia tsaroana nandritra ny lanonana "Seb-i Arus" natao omaly 17 desambra tao amin'ny Mevlana Cultural Center any Konya. Noho ny areti-mandringana manerantany, nalefa tamin'ny endrika streaming.
Ity dia iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra eran'i Torkia izay mahita isan-taona ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao mivory ao an-tanànan'ny Anatolia Afovoany mikasa hanome voninahitra an'i Rûmî - lehilahy mandefitra be, afaka maneho ny fahatsapana hatrany fitiavana ny olona mandray an'izao tontolo izao, na inona na inona fivavahany sy firazanany. Rûmî dia nanana toetra maro: poeta izy nefa koa mpahay lalàna, manam-pahaizana Silamo, teolojiana ary mistika Sufi, fa tsy izany ihany. Raha ny marina dia nisolo tena fiainana feno hatsaran-toetra izy izay ninoany ny "tena fotony", ary nilaza fa ny ambiny "tsy misy afa-tsy endrika ivelany."
Ny fankalazana dia nianjera toy ny mahazatra tamin'ny andro nahafatesany, 17 Desambra, rehefa natao ny lanonana faharoa "Seb-I-Arus", izay nampidirin'ny UNESCO ao amin'ny Lisitry ny Lova tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona - ny voalohany dia natao tamin'ny 7 desambra. Ny mistika sy ny hatsarana dia miaraka amin'ity daty ity. Ireo mpianatr'i Rumi, fantatra amin'ny anarana hoe "dervehes des whirling" miakanjo fotsy ary misy fehiloha miendrika kônda, dia nanao ilay sema nentim-paharazana sy fihodinana. Miverina mamerina ny anaran'Andriamanitra izy ireo, miaraka amin'ny mpitendry zavamaneno izay mamerina ny feon'ireo seho selestialy ary mamela ny fahanginana amin'ny hetsika farany.
Fotoana iray amin'ny mysticism avo lenta izay nahita toerana tao Konya hatramin'ny 1937. Ny tanàna dia nanomboka tamin'ny 7000 talohan'i JK ary iray amin'ny malaza indrindra any Torkia - ankasitrahana noho ny lova ara-tantara sy ara-javakanto manan-karena. I Konya dia azo raisina ho "fonenan'ny sivilizasiona sy ny fivavahana" ary koa ny tanànan'i Rûmî, izay nisy akony lehibe tamin'ny eritreritra sy literatiora mistika eran'izao tontolo izao ny fampianarany.
Voalaza fa nalahelo mafy i Rûmî taorian'ny fialàn'ny mpampianatra azy Shams-i Tabrizi (Shams of Tabriz) izay nahitany ny halalin'ny fahasalamana. Nahatonga fiovana lehibe teo amin'ny fanahiny io fatiantoka io. Nahafoy ny zava-drehetra izy ary nanoratra ny "Masnavi", fantatry ny besinimaro fa ny tononkalo sufi lehibe indrindra nosoratana sy noforonina andalana 25,000.
Ho an'i Rûmî, ny tena fitiavana dia midika fitiavana an'i Allah (Andriamanitra) raha ny fahafatesana no andro hanatevinany ny masina. Izany no antony tsy ahafantarana ny 17 Desambra, fitsingerenan'ny andro nahafatesany, ho toy ny andro fisaonana fa andro fankalazana hiainana amin'ny lanonana Seb-i Arus izay amin'ny teny tiorka midika hoe "ny alina fihaonana" na "ny alina fandriany. "
Rûmî dia mandika ny fahafatesana ho fiverenana amin'ny niandohany, "fiverenana amin'i Allah" noho ny zava-misy fa avy amin'Andriamanitra ny fiaviany. Araka ny filazany, ny fahafatesana dia tsy fahafatesan'ny vatana, fa ny dia mankany Allah.
Ny lova navelan'i Rûmî
Ireo fanangonana tononkalo nataon'i Rûmî dia heverina ho anisan'ny malaza indrindra any Etazonia. Izy no poeta be mpividy indrindra tany Amerika, ary ny tononkalony dia nampiasaina tamin'ny fankalazana ny mariazy nandritra ny am-polony taona maro ary koa tany amin'ny tontolo hafa. Ary oharina amin'i Shakespeare noho ny lalan-drà namorona azy sy tamin'i St. Francis of Assisi noho ny fahendreny ara-panahy.
Safidy tononkalo fitiavana nataon'i Rûmî navoakan'ny Deepak Chopra (trano famoahana) miaraka amin'ny dikantenin'i Fereydoun Kia, nohazavain'ny olona Hollywood toa an'i Madonna, Goldie Hawn, Philip Glass, ary Demi Moore. Misy vavahady malaza mankamin'ny tanànan'i Lucknow (renivohitr'i Uttar Pradesh) any avaratr'i India, antsoina hoe Rumi Gate, ho fanomezam-boninahitra azy.